Yoga Series Vagadziri - China Yoga Series Fekitori & Vatengesi
Yakavanzika Label yakasarudzika logo Musuru Yoga Roller Kudzora Roll Furo Roller Set EVA
Chiedza chakareruka asi chakakombama chakasimba cheEVA masaja chinotenderera ine katatu grid 3D yekukwiza nzvimbo inotevedzera munwe, chanza, uye chigunwe chemaoko erapi.
Kufamba zvine hushamwari pa1 chete lb.
Imba Exercise Gym Workout Nhabvu Kwete Slip Tsika Yakadhindwa Eco Shamwari Nyowani TPE Fitness Yoga Mats
Yoga mat inoitwa neprimiyamu TPE eco inoshamwaridzika zvinhu neSGS yakasimbiswa, Thermoplastic Elastomers (TPE) kazhinji yakaderera modulus, inoshanduka zvinhu zvinogona kutambanudzwa zvakapetwa zvichipa yakasimba mukurumari, kukwizirira uye kutsvedza-kuramba.
2PCS Gliding Discs Slider Fitness Disc Exercise Sliding Plate YeYoga Gym Abdominal Core Kudzidzira Exercise Equipment
Rumwe rutivi haruna kutsvedza iro rinokuchengeta iwe uri panzvimbo iwe paunomira pane yakakosha inotsvedza uye imwe yakatsetseka uye inotsvedza nyore nyore, kune mafambiro emakwenzi uye zvakadaro.
1. Rutivi rweplastiki rwakatsetseka nderwemakapeti.
2. Iyo yakapfava jira furo divi ndeyematanda akaomarara.
Tsika logo Inobviswa Rectangular uye Yakatenderera Yoga Bolster Buckwheat Kapok Rectangle Yakakura Yoga Pillow Bolster
Chigadzirwa zita: Yoga inowedzera / yoga inosimbisa mutsago
Chinyorwa: Cotton inosimbisa yemukati uye suede machira pamusoro
Oval yoga yekusimbisa saizi: 70 * 30 * 17cm
Yakatenderera yoga bhurasha: 70 * 23cm
Tsika logo logo Nyowani fashoni unisex kusimba slimming mitambo yoga kugwinya denderedzwa Pilates denderedzwa mhete
Kukura: 38X38X3 cm
Chinyorwa: PP mapurasitiki + EVA + girazi fiber
Ruvara: yero, girini, tsvuku, bhuruu, nhema, orenji, pepuru, grey kana yakagadzirirwa
Logo: Yakasarudzika logo inowanikwa, sirika yekudhinda logo.
Sample Nguva: stock mazuva maviri, mutengi akagadzirwa 5-7days
2021 Kupisa Kutengesa Wholesale Portable Pilates Yoga Kunamatira Kwekumba Gym Exercise
Iyo bar yekudzivirira yakavakirwa kubva kune yemhando yepamusoro EVA furo, latex tambo uye simbi pombi, inoratidzira kugadzikana kwakasimba kunogona kushandiswa kune yakakwira simba kufamba.Pilates tsvimbo inowanzo shandiswa yeYoga, Pilates, kutambanudza kurovedza muviri, kugwinya, uye mamwe mapurogiramu ekudzidzisa. Iyo zvakare yakakwana kuti ishandiswe nevakadzi mushure mekuzvitakura uye kuberekwa kuchengetedza miviri yavo muchimiro.Simbi, inobviswa pilate bar yakagadzirirwa kwenguva refu, nyore kuchengetedza, bhendi rekudzivirira rakagadzirwa nemhando yepamusoro TPE, eco-hushamwari, hapana hwema uye inogara yakasimba uye yakasimba kwazvo, haina kuremara nyore.